Commun.it: Fudud Maareynta Bulshada ee Twitter | Martech Zone
Toddobaadkan, waxaa la igu casuumay inaan ka hadlo Smartups (Smarter Marketing + Startups) oo uu aasaasay, Tim Flint. Tim waa maxalli Analytics guru. Wadahadalkaygu wuxuu ahaa mid ku saabsan hagaajinta oo aan si gaar ah uga hadlay falanqaynta… laakiin sidoo kale sida ay u fiicnaantu u saamaysay dadaalkeyga ganacsi sidoo kale
Mid ka mid ah aaggii aan taabtay wuxuu ahaa kala duwanaanshaha ubaahan tirooyinka si aan u soo jiito, laakiin ka dib iska indha tirka cayrsashada lambarada iyo wanaajinta waxyaabaha soo socda ee aad haysato. Gaar u ah Martech Zone, Kobacayagu wuu qarxay markii aan joojinnay cayrsiga SEO-ga iyo istiraatiijiyadihii ugu dambeeyay ee isku xidhka iyo - halkii - diirada la saaray bixinta macaamiisheena. Qiimahaasi wuxuu ahaa qoris badan iyo bixinta nuxur hodan ah.
Maareynta bulshadaada Twitter waxay u baahan tahay aaladaha iyo warbixinta si loo aqoonsado isticmaaleyaasha aad rabto inaad la xiriirto, dhageyso adeegsadayaasha raadinaya wax soo saarka iyo adeegyada aad bixiso, iska indha tirto ama iska dhaafeyso shebekadaha iyo akoonnada aan firfircooneyn, oo daabac ugu fiican waxyaabaha suurtogalka ah si loo soo jiito, loo haysto loona beddelo kuwa raacsan kuwa ugu waaweyn Tani waa maxay Commun.it waxay rajeyneysaa inay ku siiso isticmaaleyaasheeda barnaamijkeeda.
Commun.it wuxuu kuu soo bandhigayaa Tilmaamaha soo socda
Tilmaamo badan oo Twitter ah - Si fudud uga maamulo astaamo badan oo Twitter ah hal dashbood.
Xubnaha Kooxda - Ku martiqaad xubnaha kooxdaada inay maareeyaan bulshadaada.
Aragtiyo - Aqoonso cidda la raacayo, mahadsanid iyo ka jawaab celinta.
Monitoring - Cabir dadaalkaaga baraha bulshada, ogow waxa shaqeynaya. Ha moogaanin xusid muhiim ah.
Suuq geyn saameyn leh - Diirad saar saameyntaada sare iyo taageerayaashaada, ha moogaan waxqabadkooda, raac iyaga.
Maamul liistooyinka Twitter - dhiso bulsho ku hawlan adoo isticmaalaya liisaska Twitter-ka. U qaybi liisaska qaybaha caadiga ah.
Adeegsiga aaladaha sida Commun.it, waxaad sifiican u maamuli kartaa waxyaabaha soo socda ee cajiibka ah ee aad kari kartid halkii aad ka cayrsan laheyd wax badan. Dhibaatada ka jirta aragtida masraxa ayaa ah in dadku rumaysan yihiin in salka masku uu yahay mid taagan. Tusaale ahaan, haddii aad hesho sicir beddelaad ah 2%, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad hesho booqdayaal badan oo kordhinaya iibintaada. Waxaan ogaanay inaanay arintu sidan ahayn gabi ahaanba… waa inaad ka shaqaysaa sidii loo badali lahaa kuwa raacsan ee aad haysato.
Tags: wadaag.itbeeshaWaxqabadka BulshadaTwitter